नयाँ थर्मोमिक्स टीएम5| ThermoRecines
नयाँ थर्मोमिक्स टीएम 5
मायरा फर्नांडीज जोग्लर | | सामान्य
आज, सोमबार, नयाँ एक स्पेन मा बिक्री मा जान्छ। नयाँ थर्मोमिक्स टीएम5जुन शुक्रबार विश्वव्यापी रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो भोर्वार्क
यस किचन रोबोटको साथ उनीहरूले प्रसिद्ध मोडेलका बिभिन्न सुविधाहरू सुधार गरेका छन् TM31 क्रमशः प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकतालाई अनुकूल बनाउन।
तर हामी भागहरु द्वारा जाने:
1 तिनीहरूले के परिमार्जन गरेका छन्?
2 र मूल्य?
3 म Thermomix TM5 किन्न चाहन्छु
तिनीहरूले के परिमार्जन गरेका छन्?
अधिक एर्गोनोमिक र अपडेट गरिएको डिजाइन बाहेक, भोर्वर्कले यसमा फरक फरक परिवर्तन गरेको छ वरोमा र मा गिलास जोसँग छ ठूलो आकार। यो होइन कि भिन्नता अत्यधिक हो, तर यो ठूलो परिवारहरूको लागि उत्तम उपयुक्त छ। नयाँ वरोमाको क्षमता 3,3 लिटर र २.२ लिटरको गिलास छ।
कप र पुतली पनि अद्यावधिक गरिएको छ। डिजाइन धेरै समान छ तर धेरै आधुनिक यसको कार्यहरू राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न।
जहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ theकसमा परिवर्तन भएको थियो जसको बन्दमा नयाँ थर्मोमिक्स टीएम5यो स्वचालित हुनेछ। तापक्रम चयनकर्तामा पनि, अब १२०º मा पकाउन सक्षम भइरहेको छ। ईन्जिनले कम आवाज निकाल्छ र चेतावनी बिप अब देखि फरक हुनेछ।
अर्को नवीनता छ कि यो एक छ टच स्क्रीन रंग र एक एकल चयनकर्ता जहाँबाट तपाइँ समय, तापमान र गति नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
तर कुनै श .्का बिना महान अग्रिम यसको प्रणाली भएको छ गाईड कुकिंग। यो एक उपकरण हो जुन पक्षमा तपाईं Thermomix डिजिटल पुस्तकहरू घुसाउन सक्नुहुन्छ। उपकरणले स्वचालित तरीकाले निर्देशन विधि चरण चरणमा देखाउँनेछ, दुबै तापक्रम र समय समायोजन गर्दछ। यस तरिकाले, प्रयोगकर्ताहरूले केवल सामग्रीहरू थप गर्नुपर्नेछ र गति नियन्त्रण सक्रिय पार्नु पर्छ।
म निश्चित छु कि नयाँ प्रयोगकर्ताहरूले यी सबै आविष्कारहरू मनपर्दछन् तर हामी जोसँग छ उनीहरूलाई के हुन्छ अन्य मोडेलहरू?
हामीमध्ये टीएम model१ मोडेल भएकाले चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि व्यंजन र पुस्तकहरू छन् पूर्ण रूपले उपयुक्त। यो अझै बाँया पालो, मापन र स्पाइक गति छ, यद्यपि अब तिनीहरू यसलाई एक "घुँडा समारोह"।
यो प्रत्येक देश र यसको मुद्रामा निर्भर गर्दछ। यहाँ स्पेनमा, मूल्य हुनेछ 1100 € र मेशिनको आधार, स्टेनलेस स्टील कप, टोकरी, पुतली र स्प्याटुला, भेरोमा र १ 197 rec रेसिपीहरू सहितको डिजिटल पुस्तक समावेश गर्दछ जुन "आवश्यक" लाई बदल्छ र "सजिलो र स्वस्थ पकाउने" शीर्षक हो।
म Thermomix TM5 किन्न चाहन्छु
यदि तपाई नयाँ थर्मोमिक्स टीएम to किन्न चाहानुहुन्छ तपाईले सेक्सन भर्नु पर्छ थर्मोमिक्स टीएम Buy किन्नुहोस् वा तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
थर्मोमिक्स TM5 सबैको साथ ...
आशा छ कि तपाईंलाई यो नयाँ मोडेल मनपर्दछ!
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सामान्य
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » लेखहरू » सामान्य » नयाँ थर्मोमिक्स टीएम 5
हामीले हाम्रो पहिलो पुस्तक प्रकाशित गरेका थियौं !!
समुद्री किनार र पोखरीमा पुग्नको लागि उत्तम रेसिपीहरू
Thermorecetas मा नयाँ उपहार! अमेजन मा हाम्रो किताबहरु र € ५० जित्नुहोस्